Quruxda Archives - Daryeel Magazine
Alarabiya.net The cold weather can take its toll on our skin. The cold air outside and central heating indoors can strip moisture from our pores, causing itchy and parched skin. Your wool-blends and knits are not the only items that should get heavier in the colder months – your face moisturizers should too, to protect your skin against the elements. …
Collagen kollajeen waa maadda “Protein” brootiin ah oo jirkeenna kujira maaddadaa oo qaabilsan arrimo badan sida: Xoojinta maqaarka iyo tinta Xoojinta ilkaha ,cidiyaha iyo lafaha Kobcinta diffaaca jirka Caafimaadka Wadnaha Hadaba sirta quruxda maqaarka inbadan waxa ay kuxirantahay qofka inuu kobcisto maaddadaan, markasta qofka da’diisu korodho waxaa is dhima kollajenka jirkiissa sidaa darteed qofkii calaamadaha gabowga ayaa kusoo dagdaga haddii uusan diffaac galin …
Haddii aad hore ugu ogeyd timirta in ay tahay cuntooyinka aasaasiga ah ee bisha Ramadaan, maadaama oo ay si tayo badan leh ula dagaalanto mariidka, isla markaana ay leedahay faytamiinno ah noocyada E, B iyo A waxa aad ogaataa in isla faytamiinnadaas awgood ay sida oo kalana tahay dawo u fiican caafimaadka maqaarka iyo timaha. Qormadan waxa aynu ku eegaynaa …
Waa nafaqo dabiici ah oo loogu talo galay iney kaa caawiso tinta jajabaysa taasoo laga samaynayo ukun, saliid macsar, caano qumbe iyo avocado. Ka faa’iidaysi wacan:
Bunku waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa liiska badeecadaha loogu ganacsi badan yahay dunida oo dhan, waxa ka horreeya oo keliya shidaalka, waxa aanay tirokoobyo la sameeyey muujinayaan in qiyaas ah 5 kun oo Bilyan oo koob oo bun ah sannad kasta dunida lagu cabbo. Waxa aanay khubarada ka faallooda caafimaadka cuntadu sheegeen in bunka oo si jogto ah oo …
Indhaha oo ka mid ah lixda dareeme ee aanu aadamuhu nolol maalmeedkiisa uga maarmi Karin, waxa ay dhinaca kalana qurux u yihiin muqaalka wejiga ee qofka, quruxdooda iyo caafimaadkooduna waxa uu dhammaystir iyo astaan u yahay quruxda wejiga oo ay u muujin karaan dhalinyaro ama gabow, caafimaad ama xanuun, farxad ama murugo, firfircooni ama caajis iwm. Haddaba haddii caafimaadka indhaha …
Dawada Dabiiciga ah ee Agoolka ama Toxobta
Agoolka waa qolofta ka dhex abuuranta timaha meeshey ka heystaan lafta madaxa. Calaamadaha agoolka waxaa ka mid ah toxob cad oo basada saarsaaran ama tinta ku dhegan iyo basada oo leh cuncun. Agoolka maxaa sabab u ah? Asbaabo badan ayuu leehahay waxaa ka mid ah: Maqaarka oo qallalan (qofka aan saliida isticmaalin) Timaha oo aan si joogto ah loo shanleyn Nafaqo …
Jilciso Dabiici Ah Oo Tinta U Fiican
Qormadaan waxaan kusoo gudbinaynaa jilciso dabiici ah oo looga maarmi karo daawooyinka kiimikada ah ee loo adeegsado in timaha lagu jilciso kuwaas oo caafimaadka u daran. Alaabta maanta aan idin la wadaadayno waa nafaqo timaha la marinayo. Caruurta iyo dadka waa weyba way anfacaysaa waxaana laga samaynayaa miraha flax seed oo ah nooc ka mid ah dalagyada la cuno taasoo …
Ahmiyada Biyaha Bariiska Ay U Leeyihiin Jidhka Iyo Timaha Dumarka (TIJAABO CILMI AH)
Kadib markii ay bateen oo faraha ka baxeen daawooyinka la isku qurxiyo ee jidhka iyo timahaba loo isticmaalo kuwaas oo suuqyada soo buux dhaafiyay ayaa waxaa dad weynaha gaar ahaan haweenka ku adkaaday inay kala saaraan oo oo kala doortaan nooca ku habboon jidhkooda ee ay ku kalsoonaan karaan. Taas darteen ayaa culimada dhanka isqurxintu waxay bilaabeen inay ku taliyaan …
Ma Rabtaa Wax Dabiici Ah Oo Wajiga Kuu Nuuriya?
Kaarootadu Waxay Ka mid tahay khudaarta qaniga ku ah fitamiinna badan ha ugu horreeyee Vitamin A sidaa darteed waxay in badan ka qayb qaadataa quruxda maqaarka, qofkii marsada wajiga oo kale wuxuu ka helayaa faa’iidooyin badan waxaa kamid ah faa’idooyinkaa : Dhalaal dahabi ah. Nadaafad dheerri ah. Nafaqqo aan la koobi karin. Maqaarka oo noqda smooth . Calaamadaha Gabowga oo …
Warbixinno marar kala duwan lagu qoray wargeyska Daily Mail ee ka soo baxda dalka Ingiriiska iyo shabakadda Internet ka ee New Blase ayaa iyaga oo soo xiganahay xeeldheerayaal aqoon fog u leh caafimaadka iyo quruxda timaha waxa ay sheegeen cuntooyin qofka cunistooda joogteeya isbeddel caafimaad lagu arko timihiisa. Sida caadiga ah khubarada caafimaadku waxa ay caddeeyeen in nafaqada cuntada qaarkeed …
Jeexjeexa Maqaarka (Stretch Marks)
Dildilaaca jirka ama ‘Stretch Marks’ waa diilmo kasoo baxa jirka inta hoose, naasaha, gacamaha inta kore, canjirada, iyo kubka. Dildilaaca jirka ayaa badana lagu arka haweenka uurka leh waliba bilaha dambe ay uurka leeyihin. Strech Marks ayaa midabo kala duwan iska leh taasoo ku xiran qofka midabkisa. Calaamadaha lagu garto? Dildilaaca jirka kuligood ma isku eka, waxey ku xiran yihin …
Gacmahaagu waxay ka mid yihiin xubnaha ugu mashquulka badan jirkaaga, waxaad u udeegsataa howlo badan maalin kasta. Dad badani gacmahooda sii fiican uma daryeelan waxayna taasi u horseedaa gacmo engegan oo u eeg inay duqoobeen. Waxyaabo badan ayaa keeni gacmo qalaylka, waxaa ka mid ah hawada qalalan, qoraxda oo jirka gubta, gacmaha oo dhaqidda laga badiyo, iyo hawada qabow. Waxaa …
Daldaloolada Wajiga (Open Pores)
Daldaloolada wajiga waxay qofka ku beeraan walaac dhanka quruxda ah, Haddi daldaloodu ay xirmaan waxuu qofku isku arkaa burooyin iyo finan waa weyn oo dheecaan leh gaar ahaan qofka jirkiisu yahay nooca saliida leh. Saliid, bakteeriyo iyo wasakh ayaa gala oo xiri kara daldaloolada, burooyinku (blackheads) waxay ka dhigaan daldaloolada kuwo si fiican loo arki karo oo waa weyn. Waxyaabaha …
Sida Ilkaha Loogu Caddeeyo Dhuxusha
Waxaa jira dad badan oo raadiya siday ilkahooda u caddeyn lahaayeen, hadaba Hafza ayaa inoo tilmaamaysaa hab sahlan oo ilkaha loo caddeyn karo isla markaana kharash badan uusan kaaga baxayn Habkaan waa mid dhaqan inoo ah oo mudo dheer dadkeenna Soomaaliyeed adeegsan jireen balse reer galbeedku dhawaan ay bilaabeen, Waa sida ilkaha loogu caddeeyo dhuxusha. Dhakhaatiirta ayaa sheega inay dhuxushu …